माधव नेपाललाई प्रश्न– तपाईंहरू ओली सरकार टिकाउने कि ढलाउने पक्षमा ?
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकारबारे विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन् । संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेपालले पार्टी र सरकारलाई कसरी लाने र अन्य पार्टीसँगको सहकार्यलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने बताएका हुन् ।
उनले पार्टीमा हामी छलफल गरेर कसरी पार्टी लाने, आन्दोलन लाने कसरी, सरकार लाने कसरी, अरू पार्टीसँगको सहकार्य गर्ने कसरी, जनताको विश्वास जित्ने कसरी, जनताका गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने कसरी, पार्टीभित्रको विमतिलाई सम्बोधन गर्ने कसरी, यावत् कुराको बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन् ।
माधव नेपाललाई प्रश्न– तपाईंहरू ओली सरकार टिकाउने कि ढलाउने पक्षमा ? (भिडियोसहित)
एमालेको नेपाल समूहका नेताहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णायक भूमिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भएको बताएका छन् ।
नेपाल समूहका नेताहरूको धारणा- एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णायक भूमिका ओलीकै